ငါ WordPress ကို 2.1 ချိုးဖောက် | Martech Zone
ငါ WordPress 2.1 ကိုဖဲ့
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 25, 2007 Douglas Karr
အိုကေလူတိုင်း snickering ဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါသည်ဤကို default ဆောင်ပုဒ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်၏အခင်းအကျင်းဟောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းထားသည့်ထုံးစံကုဒ်များအားလုံးကို 'ပြင်ဆင်ရန်' ကြိုးစားမည့်အစား၎င်းကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါ WordPress အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအခင်းအကျင်းကိုတည်ဆောက်စဉ်ငါနှင့်အတူခဏတာမျှသည်းခံလိုက်ပါ။ ငါသည်ဤရုပ်ဆိုးဆောင်ပုဒ်ကိုစောင့်ရှောက်သွားမယ်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆောင်ပုဒ်ပိုမိုမြန်ဆန်ထွက်အထဲကရဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆျော။ ငါနောက်ဆုံးညဥ့်ကအပေါ်စတင်!
ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ3နာရီ 42 မိနစ်
ကံကောင်းပါစေ။ အရာအားလုံးက ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေခဲ့ပေမယ့် ပျက်ကျတာကိုတော့ စောင့်မျှော်နေခဲ့ပါတယ်။ WordPress ကို အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့အခါ တစ်ခုခုမှားသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာ အမြဲသံသယဖြစ်မိပေမယ့် အခုထိတော့ ဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူး။
ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ4နာရီ 20 မိနစ်
ဖြစ်ပျက် [ဒါမှမဟုတ်] အဲဒါ ဘယ်လိုလဲ ငါသိတယ်။ ကံကောင်းပြီး မင်းရဲ့အသွင်အပြင်ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ဖို့ ဒီအခွင့်အရေးကို ခံစားလိုက်ပါ။
ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ5နာရီ 05 မိနစ်
ကျွန်ုပ်၏ WordPress အဆင့်မြှင့်တင်မှုအပြီးတွင် ကောင်းမွန်သော ပို့စ်ခေါင်းစဉ် 🙂 ပုံလင့်ခ်များသည် အနည်းငယ် buggy ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း မဟုတ်ပါက ၎င်းသည် အလွန်နှေးကွေးပါသည်။
သင့်အပြင်အဆင်အသစ်သည် ပေါ့ပါးသွက်လက်နေမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ5နာရီ 10 မိနစ်
Doug ကံကောင်းပါစေ။ တူညီသောကံကြမ္မာကို ခံစားရမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် WordPress 2.1 သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါသည်။
အရင်တုန်းက WordPress themes တော်တော်များများကို လုပ်ခဲ့ပြီးပြီမို့ အကူအညီလိုရင် လှမ်းအော်ပြောလိုက်ပါ။
ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ6နာရီ 00 မိနစ်
မင်းရဲ့ "မူလ" အပြင်အဆင်က အရမ်းကောင်းမယ်ထင်တယ်။ သင်ထင်သလောက် မဆိုးပါဘူး။ ပြီးတော့ "မူလ" အပြင်အဆင်ကိုတောင် လှည့်စားရုံနဲ့ ကြည့်ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သက်သေပြခဲ့ပြီးပြီထင်ပါတယ်။
သို့သော်၊ စိတ်ကြိုက်ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုရှိခြင်းဖြင့် အထောက်အထားတစ်ခုဖန်တီးပါ - အဲဒါက ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကမ္ဘာကို အမှန်တကယ်ပြသနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ပုံစံရှိတဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိဖို့ လိုအပ်တယ်။
မင်းရဲ့အပြင်အဆင်အသစ်ကို တွေ့ရဖို့ ငါမျှော်လင့်နေပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ6နာရီ 02 မိနစ်
မင်းဆေးလိပ်ကိုပြောတာလို့ ငါထင်တယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် 30 က ဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ရံဖန်ရံခါ ဆေးပြင်းလိပ်ကို လက်ခံပေမယ့် မရှူဘူး
ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ6နာရီ 03 မိနစ်
ဝိုး - အံ့သြဖွယ်ထောက်ခံမှု။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒီဆောင်ပုဒ်ရဲ့ ရိုးရှင်းမှုကို တကယ်ကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ အပြင်အဆင်တွင် ရိုးရှင်းသော ရိုးရှင်းမှုအချို့ကို ပေါင်းစပ်နိုင်မလား။ နောက်ဆုံးတစ်ခုက အနည်းငယ် အလုပ်ရှုပ်နေပါသည်။
ဝိုး! ဤသည်မှာ သင်အသုံးပြုနေသည့် လှပသော WordPress ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာခေါ်လဲ? 🙂
အိုး ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲ snickering ၊ ငါလည်း snickers အရက်ဆိုင်ကို ဖြတ်လိုက်တယ်။
ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ7နာရီ 14 မိနစ်
ကျွန်တော် အပြည့်အဝ နားလည်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ ဆိုဒ်အသစ်ကို ကျွန်ုပ်၏ အပြင်အဆင်ကို မချိုးမှီတိုင်အောင် သွားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အနည်းငယ် ပျော့ပျောင်းမှုက ပိုဆိုးသွားသည် ။ အဲဒါကို ပြန်ဆောက်ရတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ယခင် - ဘလော့ဂ်မဟုတ်သော - ဆိုက်သည် ပျက်နေချိန်ဖြစ်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် ဝဘ်ဆိုဒ်မရှိသည်မှာ တစ်လနီးပါးရှိပြီဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က ဝဘ်စီးပွားရေး တီထွင်သူပါ။
ဇန်နဝါရီလ 25 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ7နာရီ 20 မိနစ်
အို လူ! John Chow က ကျွန်မကို ပန့်ခ်လုပ်ခဲ့တယ်။ အိုး!!!
ဇန်နဝါရီ 26, 2007 မှာ 5: 44 AM
ဒီဟာက အရင်အဟောင်းတွေထက် အများကြီး ပိုသန့်ရှင်းနေတာကို တွေ့ရတယ်။ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး အံဝင်ခွင်ကျ ချက်ပြုတ်ရမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။